Nasirifo bɔhyɛ (1-21)
Sɛnea asɔfo hyira ɔman no (22-27)
6 Yehowa toaa so ne Mose kasae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: 2 “Wo ne Israelfo no nkasa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Sɛ ɔbarima anaa ɔbea biara hyɛ bɔ titiriw bi sɛ ɔbɛyɛ Nasirini*+ ama Yehowa a, 3 ɔntwe ne ho mfi bobesa ne nsã a ɛbow biara ho. Ɛnsɛ sɛ ɔnom bobesa a emu kaw anaa nsã a ɛbow a emu kaw biara.+ Ɛnsɛ sɛ ɔnom bobe mu nsu biara anaa odi bobe; nea ɛyɛ mono oo, nea awo oo, ɛnsɛ sɛ odi. 4 Nna a ɔde bɛtena ase sɛ Nasirini nyinaa, ɛnsɛ sɛ odi biribiara a efi bobe mu; bobebun oo, ne hono oo, ɛnsɛ sɛ odi. 5 “‘Nna a wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ Nasirini no nyinaa, ɛnsɛ sɛ oyi ne ti nwi.*+ Ɛsɛ sɛ ogyaw ne ti nwi ma efuw de kyerɛ sɛ ɔyɛ kronkron, kosi sɛ nna a watu ne ho asi hɔ ama Yehowa no bɛba awiei. 6 Na nna a watu ne ho asi hɔ ama Yehowa no nyinaa, ɛnsɛ sɛ ɔkɔ* onipa* a wawu ho. 7 Sɛ ne papa anaa ne maame anaa ne nuabarima anaa ne nuabea mpo wu a, onngu ne ho fĩ,+ efisɛ sɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nasirini ma Onyankopɔn no wɔ ne ti so. 8 “‘Nna a ɔde bɛtena ase sɛ Nasirini nyinaa, ɔyɛ kronkron ma Yehowa. 9 Nanso sɛ obi wu tɔ ne nkyɛn prɛko pɛ+ na sɛ ne ti nwi a ɛkyerɛ sɛ wɔayi no asi hɔ ama Onyankopɔn no ho gu fĩ* a, ɛnde ɛda a obedwira ne ho no, ɛsɛ sɛ oyi ne ti nwi.+ Onyi ne ti nwi no ɛda a ɛto so ason no. 10 Na da a ɛto so awotwe no, ɔmfa mmuruburuw abien anaa mmorɔnoma mma abien mmrɛ ɔsɔfo no wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano. 11 Ɔsɔfo no de baako bɛbɔ bɔne ho afɔre na ɔde baako nso abɔ ɔhyew afɔre de apata ama no+ wɔ onipa* a wawu a ama wayɛ bɔne no ho. Owie a, ɔntew ne ti no ho saa da no. 12 Na ɔnsan nhyira ne ho so bio mma Yehowa, nna a ɔde bɛtena ase sɛ Nasirini no. Ɔmfa odwennini kumaa a wadi bɛyɛ afe mmɛbɔ afodi afɔre. Nanso, nna a kan no ɔde tenaa ase sɛ Nasirini no de, ne nyinaa bɛhyew agu, efisɛ wagu ne ho fĩ. 13 “‘Mmara a ɛwɔ hɔ ma Nasirini ni: Sɛ nna a ɔbɛtena ase sɛ Nasirini no+ ba awiei a, wɔmfa no mmra ahyiae ntamadan no ano. 14 Ɛhɔ na ɔmfa nneɛma yi mmɛbɔ afɔre mma Yehowa: odwennini kumaa baako a ɔte apɔw a wadi bɛyɛ afe a wɔde bɛbɔ ɔhyew afɔre,+ oguammere kumaa baako a ɔte apɔw a wadi bɛyɛ afe a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre,+ ne odwennini baako a ɔte apɔw a wɔde bɛbɔ asomdwoe afɔre.+ 15 Afei ɔmfa ngo mfra esiam muhumuhu nyɛ paanoo a mmɔkaw* nnim a ɛte sɛ kawa ngu kɛntɛn mu, na ɔmfa paanoo ntraantraa a mmɔkaw nnim a wɔde ngo asra ho, ne ɛho aduan afɔre+ ne ɛho nsã a wɔde bɛbɔ afɔre+ no mmra. 16 Ɔsɔfo no mfa mmra Yehowa anim, na ɔmfa mmɛbɔ bɔne ho afɔre ne ɔhyew afɔre mma no. 17 Afei ɔmfa odwennini no ne paanoo a mmɔkaw nnim a egu kɛntɛn mu no mmɔ asomdwoe afɔre mma Yehowa, na ɔsɔfo no mmɔ ɛho aduan afɔre+ ne ɛho nsã afɔre. 18 “‘Nasirini no nyi ne ti nwi a wagyaw no kusuu* no+ wɔ ahyiae ntamadan no ano. Oyi wie a, ɔmfa nwi a ogyaw no kusuu bere a ɔyɛ Nasirini no ngu ogya a wɔde rebɔ asomdwoe afɔre no mu. 19 Bere a Nasirini no ayi ne ti nwi a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nasirini no awie no, ɔsɔfo no mfa odwennini no basa baako a wɔanoa,+ na onyi paanoo a mmɔkaw nnim a ɛte sɛ kawa a egu kɛntɛn mu no baako, ne paanoo tratraa a mmɔkaw nnim baako, na ɔmfa ngu Nasirini no nsam. 20 Afei ɔsɔfo no nhim nneɛma no sɛ ohim afɔre wɔ Yehowa anim.+ Ɛyɛ ade kronkron ma ɔsɔfo no, ɛno, ne aboa a wɔde bɔɔ ohim afɔre no koko, ne ne nan a ɛyɛ afɔrebɔde no nyinaa.+ Wowie a, nea na ɔyɛ Nasirini no betumi anom nsã.* 21 “‘Mmara a ɛwɔ hɔ ma Nasirini+ a ɔhyɛ bɔ ni: Sɛ ɔhyɛ bɔ, na obetumi abɔ afɔre ama Yehowa aka nea ɛsɛ sɛ Nasirini yɛ ho a, ɛnde ɛsɛ sɛ odi ne bɔhyɛ no so sɛnea mmara a ɛwɔ hɔ ma Nasirini te.’” 22 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 23 “Ka kyerɛ Aaron ne ne mma sɛ, ‘Sɛɛ na ɛsɛ sɛ muhyira Israelfo.+ Monka nkyerɛ wɔn sɛ: 24 “Yehowa nhyira wo+ na ɔnhwɛ wo so. 25 Yehowa ntew n’anim mma wo*+ na ɔnyɛ wo adom. 26 Yehowa mma n’ani so nhwɛ wo na ɔmma wo asomdwoe.”’+ 27 Na wɔmfa me din nto Israelfo so+ na minhyira wɔn.”+
^ Hebri, na·zir′. Ɛkyerɛ, “Nea Wɔayi No Asi Hɔ; Nea Wɔahyira No So.”
^ Anaa “oyiwan ka ne ti.”
^ Anaa “ɔbɛn.”
^ Anaa “ɔkra.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “ne ti a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nasirini no ho gu fĩ.”
^ Anaa “ne ti a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nasirini no.”
^ Nt., “Yehowa mma n’anim nhyerɛn wɔ wo so.”